Ixabisa malini i-SEO?
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela ayisiyiProjekthi
NgoMgqibelo, nge-5 kaFebruwari ngo-2011 Douglas Karr
Amaxesha ngamaxesha, sinethemba lokuza kuthi kwaye lisicela ukuba sibeke ndawonye ipowuteshini yeprojekthi ekusebenziseni injini yokukhangela. Bantu, ukukhangela kweinjini yokukhangela ayisiyonjongo. Ayingomzamo onokuwugqiba kuba uhlasela ithagethi ehambayo. Yonke into iyatshintsha ngokukhangela:
Iinjini zokukhangela zilungelelanisa ii-algorithms zazo -UGoogle uhlala ehlengahlengisa ukugcina phambili kogaxekile kwaye, ngoku kutsha nje, iifama zomxholo. Ukuqonda indlela yokubonisa umxholo wakho xa olu tshintsho lusenzeka kunokuphucula iziphumo zakho. Ukungalungelelanisi kunokufumana indawo yakho ingcwatywe. Ngokwesiqhelo ayisiyonto imbi kangako, kodwa siyalubona utshintsho lusenzeka kunye nabaxumi bethu.
Abo bakhuphisana nabo bahlengahlengisa amaqhinga einjini yokukhangela -Ukhuphiswano lwakho lwenza utshintsho kwiindawo zabo kwaye kusenokwenzeka ukuba banabacebisi abakhulu be-SEO ababanceda nabo. Ukuba usezingeni eliqinileyo kwaye wenza imbuyekezo enkulu kutyalo-mali, ngumcimbi wexesha kuphela ngaphambi kokuba ukhuphiswano lwakho luqale ukutyala imali kwisicwangciso.
Izicwangciso zenkampani yakho, iimveliso kunye neenkonzo ziyatshintsha -Indlela inkampani yakho ezahlula ngayo kukhuphiswano ihlala itshintsha ngokuhamba kwexesha njengoko ukhula, uncipha okanye uphuhlisa amanqaku amatsha, iimveliso kunye neenkonzo. Ukuphuculwa kokhangelo lwakho kufuneka kuhambisane noku.
Ukusetyenziswa kwegama elingundoqo - Ngamanye amaxesha, amagama abasebenzisi abaza kukhangela nawo ayatshintsha ngokuhamba kwexesha. Njengomzekelo, isicelo, iqonga, yaye isoftwe Zonke zinemigangatho eyahlukeneyo yokukhangela kwishishini lobuchwephesha. Nangona zonke zinokusetyenziswa ngokufanayo, ukusetyenziswa kwazo kutshintshile kukuthandwa ekuhambeni kwexesha.
Imiqulu yokukhangela iyatshintsha -Ixesha lomhla, usuku lweveki, utshintsho lwenyanga kunye nolonyaka lunokuchaphazela ukukhangela. Imiyalezo yakho kunye nomxholo unokufuna ukulungelelanisa nendawo yokuhlala.
Itekhnoloji yeplatifomu iyatshintsha -Sizibonile iisayithi ezintle eziphantse zanyamalala kwiziphumo zokukhangela ukusukela oko I-CMS ayilungiswanga okanye unxibelelane neenjini zokukhangela. Ukuba unayo i-CMS endala engakhange ihlaziywe, uya kuphulukana namandla okuphucula ukugcwala kweinjini yokukhangela.
Indawo ezifanelekileyo ziyatshintsha -Yintoni eyayisakuba yeyona ndawo ithandwayo kumzi-mveliso wakho isenokungabi… igunya lesayithi litshintsha lonke ixesha. Ukuqinisekisa ukuba indawo yakho inyuselwe kwiindawo ezingaphezulu ziya kuqhubeka nokwandisa ukuthandwa kwendawo kunye nenqanaba.
Ukuba nomcebisi okanye ubhaliso oluqhubekayo kunye nomboneleli omkhulu we-SEO uya kunika inkampani yakho imbuyekezo efanelekileyo kutyalo-mali ukuba ibango lokukhangela likho. Ukuba inkampani yakho inezinto zangaphakathi zokusebenza kunye nokukhangela, ukubhaliselwa I-SEOmoz or gShiftLabs ngezixhobo zokubeka iliso kufanelekile kutyalo-mali.
Xa abathengi bethu bekwazi ukugcina olu tshintsho, siyaqhubeka nokubona ukwanda kotyalo-mali, iindleko zabo ngokukhokela ziyaqhubeka ukwehla, kwaye bayakwazi ukuphakamisa ngokupheleleyo ukukhangela abathengi abatsha. Ifuna ukubeka esweni okuqhubekayo kunye nokuphuculwa, nangona kunjalo. Ukuba inkampani yakho icelwa yinkampani ye-SEO enemirhumo yeprojekthi esemgangathweni apho baya kuyenza nkulu indawo yakho ukuze babhatale umrhumo kwaye uhambe, unokufuna ukuphinda ucinge ngotyalo-mali.
tags: Iziphumo zeshishiniCokeuphononongo lomthengi ividiyo
Mihla le: Ukuphinda ubambe iindaba zeDijithali
Yilungele i-Facebook Mobile
Feb 5, 2011 ngo-11: 02 PM
Ndiye ndafumana amava afanayo kunye nabathengi, luhlobo lomceli mngeni ochazela abathengi ngokubaluleka kwe-seo. Ndiyaqonda ukuba basoloko befuna ukubona i-ROI, ngohlahlelo singababonisa enye yaloo nto, kodwa unyanisile ngumzamo oqhubekayo.
Feb 5, 2011 ngo-11: 47 PM
Ndikhe ndaneengxaki ezifanayo - omnye umxhasi uthe bafuna ukwenza iwebhusayithi, bayinyuse kwaye isebenze, kwaye emva koko "i-SEO-optimize" emva kokuba iphile. Ndizama ukucacisa ukuba umxholo ubaluleke kakhulu kwiinjini zokukhangela, kwaye kulula kakhulu ukuqala ukubhala ngophendlo lwendalo engqondweni. Abantu abaninzi abafumani ingcinga ezisisiseko ze-SEO. Ndicinga ukuba yiyo loo nto kuya kuhlala kukho intengiso yabacebisi be-SEO!
Feb 10, 2011 ngo-12: 05 AM
Kuzo zonke iindawo zeNtengiso ye-Intanethi, ukuSebenza kweNjini yoPhando yeyona nto ingaqondwa kakuhle, kwaye mhlawumbi ibaluleke kakhulu kwimigudu yakho yokuthengisa. Kukho izigidi ngezigidi zamaphepha omxholo wewebhu phaya - ungasebenza nzima, wakhe indawo enkulu, kwaye emva koko ulahleke ngokupheleleyo kushuffle. I-SEO ibalulekile. Ikwayinkqubo entsonkothileyo kakhulu efuna umonde, ukucwangcisa ngononophelo kunye nendlela yexesha elide.
Mar 2, 2011 ngo-11: 14 AM
Enkosi ngala mazwana
Juni 24, 2013 ngo-10: 40 PM
Enkosi ngokwabelana ngolwazi!
Juni 26, 2013 ngo-9: 27 PM